प्रधानमन्त्री आउने भएपछि हीरक महोत्सवको तैयारीमा कसरी अघि बढ्दै छ विद्यालय ? हेरौ भिडियो रिपोर्ट | Buddhavumi News
५ फाल्गुन २०७५ २०:१२ February 17, 2019 anish gaireLeaveaComment on प्रधानमन्त्री आउने भएपछि हीरक महोत्सवको तैयारीमा कसरी अघि बढ्दै छ विद्यालय ? हेरौ भिडियो रिपोर्ट
अनिश शर्मा गैरे, गुल्मी
महोत्सव सुरु हुने मिति नजिक नजिक आइरहँदा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका ७ वामीटक्सार स्थित महेन्द्र आदर्श माबिमा यतिबेला चटारो निकै बढेको छ ।
आयोजकहरु महोत्सवलाइ भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नको निम्ती निकै खटेका छन् । भौतिक व्यवस्थापनको काम देखी लिएर आर्थिक संकलन सम्मका कामहरु अगाडी बढीरहेका छन् ।
हाल सम्म करिब २ करोड ५० लाख रकम संकलन भएको विद्यालयका शिक्षक तथा लेखा समितिका संयोजक डिल्लीराज खरेलले जानकारी दिए ।
बिद्यालयका अध्यक्ष भुवन केसीले हालसम्मकै सर्वाधिक राशिको सहयोग गरेका छन् । उनले ५५ लाख ५ सय ५५ रुपैया सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
मुसिकोट नगरपालिकाले विद्यालयलाइ सहयोग गर्ने ५० लाख सहित गरी उक्त रकम संकलन भएको र फरक फरक ठाँउमा आर्थिक संकलन भइरहेकोउनले बताए । महोत्सबको अवसर पारी विद्यालयमा इन्जिनीयरीङ्ग सहितको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यका साथ ५ करोड अर्थ संकलन गर्ने लक्ष्य राखीएको छ ।
जसको लागि अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरीनुका साथै तयारीका हरेक उपायहरु अबलम्बन गरीएको छ ।
महोत्सब लक्षित गरी विद्यालय भवन रँगरोगन तथा सिँगारपटारको काम पनि भइरहेको छ । विद्यालयका दुइ स्थानमै रहेका भवनहरुलाइ विभिन्न संकेतहरु सहित पेन्ट गर्ने र झलमल्ल गराउने काम भइरहेको हो ।
महोत्सबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथिको रुपमा आउनुहुने भएको छ । फाल्गुण १३ गते समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रधानमन्त्री आउने गरी उहाँले निमन्त्रण स्विकार गर्नुभएको मुल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रकाश काफ्ले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको आगमनलाइ समेत लक्षित गरी बिद्यालयसँग जोडिएका सडकहरु ग्राभेलिङ्गको कार्य पनि सुरु भएकोछ । प्रधानमन्त्री रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा हेलिकप्टरमार्फत अवतरण गर्नुहुनेछ ।
त्यसलगत्तै नगरपालिका सम्म जोडीएको सडक ग्राभेल गरीदै छ । त्यसैगरी वामी बसपार्क देखी बिद्यालय सम्म जोडिएको सडक पनि ग्राभेल गर्ने कार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नै आउने भएपछि यस महोत्सबलाइ जिल्ला प्रदेश देखी राष्ट्रको केन्द्र सम्मले नियालीरहेको छ । सबैको ध्यान यतै तर्फ परिरहेको छ ।
बिद्यालयले आयोजना गरेको श्रीमद्भभागवत धन–धान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञको लागि अब मण्डप बनाउने, हवन कुण्ड बनाउने काम पनि सुरु भएको । सप्ताहब्यापी महायज्ञमा प्रमुख बाचक पण्डित कलमनयन गौतमले प्रवचन दिनुहुने छ । त्यसैगरी नेपालकै चर्चित भजन मण्डलीको भजन तथा झाँकी प्रदर्शन पनि हुने छ ।
बिद्यालयले यसरी बडो मिहेनत र तामझामका साथ आर्थिक संकलनको लक्ष्य सहित गर्न लागेको हीरक महोत्सब मार्फत आगामी आर्थिक बर्षदेखी बिद्यालयमा इन्जिनीयरीङ्ग सहितको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्धेश्य राखीएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा बिना अबको देश र समाजको बिकास पनि सम्भव नभएकाले अहिलेको शिक्षा अब्यवहारीक भएको भन्दै बिभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठीरहेको समयमा बिद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको निम्ती पहल थालेको हो । हालसम्म महोत्सब तथा महायज्ञको निम्ती मूल आयोजक समिति, कार्यकारीणि समिति, कार्य सम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गरी मुख्य ४ समिति र सो समितिहरुको मातहतमा रहने गरी अन्य ३३ वटा उपसमितिहरु गठन गरीएको छ ।
सो महायज्ञमा प्रमुख बाचकको रुपमा भागवत भाष्कर पण्डित श्री कमलनयन गौतमलाई चयन गरीएको छ । महोत्सबको प्रचार प्रसारको लागि स्वागत गेट बनाउने देखी लिएर निमन्त्रणा कार्ड साथै ब्रोसर, पम्प्लेट, होर्डिङ्ग बोर्ड, स्टीकरहरु तयार बितरण भइरहेका छन् ।
बिद्यालयलाइ ५५ लाख भन्दा माथि सहयोग गर्ने दातालाइ बिद्यालयको बाटीकामा दानवीर वा दानवीरले इच्छाएको ब्यक्तिको पुर्णकदको शालिक निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी ४० लाख देखि ५५ लाख सम्म सहयोग गर्ने दाताको परिवारका ४ सदस्यलाइ हेलिकप्टरबाट नगरपरिक्रमा गराइ मञ्चमा ल्याइ सम्मान गर्ने, बिद्यालयमा दानवीर वा इच्छाएको ब्यक्तिको अर्धकदको शालिक निर्माण गरीने लगायतका सम्मान प्रदान गरीने बिद्यालयले जनाएको छ ।
१३ गते प्रधानमन्त्रीद्धारा उद्घाटन हुने कार्यक्रममा २० गतेसम्म चल्नेछ । हाल कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुँदै आइरहेको बिद्यालयले छुट्टै भवनमा अँग्रेजी माध्यमको कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
निकट भविष्यमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ यस बिद्यालयको सम्पुर्ण टिम तथा अन्य सरोकारवाला शिक्षाप्रेमी बिद्यालयप्रेमीहरु लागि परेका छन् । महोत्सब सम्पन्न गर्न गठन गरीएका विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु काममा खटिएका छन् ।
नेकपा गुल्मीले ताेक्याे वडा कमिटीमा जिम्मेवारी, मालिका गाउँपालिकाको वडा स्तरिय सपथ ग्रहण सम्पन्न
भिमगिठे दुर्घटना अपडेटः मृतक १४ जनाको सनाखत
१७ मंसिर २०७६ १६:१७ December 3, 2019 buddha vumi
२३ भाद्र २०७५ ०६:४८ September 8, 2018 buddha vumi
गुल्मीको मुसिकोटमा नगरपालिका स्तरीय ३ दिने बाख्रापालन तालिम सम्पन्न ।।
२३ माघ २०७६ २१:०२ February 6, 2020 buddha vumi
राजविराज – भारतीय नागरिक रहेका ज्वाइँलाई छोरा [पुरा पढ्नुहोस]
भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारलाई धेरै असफलता
काठमाडौँ । विभिन्न किमिसका भ्रष्टाचार मुद्दामा [पुरा पढ्नुहोस]
बाँदर आतंकले लुम्पेकी किसान आजित १५ रोपनीको मकै खेती नष्ट
टोपलाल अर्याल, गुल्मी, २३ जेठ । गुल्मीको सत्यवति [पुरा पढ्नुहोस]
आज प्रकाशित पत्रपत्रिकामा छापिएका आजका कार्टुनहरू
काठमाडाैं । आज प्रकाशित पत्रपत्रिका नागरिक दैनिक र [पुरा पढ्नुहोस]
विद्यालयको वार्षिकउत्सवमा भलिवल र हाजिरिजवाफ
दधिराम खनाल, गुल्मि । वाग्ला मावि वाग्ला चौतारा [पुरा पढ्नुहोस]